अम्बानीको भन्दा धेरै थियो यी ड्रग्स डीलरको सम्पत्ति, जसले छोरीलाई चिसो लाग्दा जलाए २० करोड !
January 20, 2018	Comments Off on अम्बानीको भन्दा धेरै थियो यी ड्रग्स डीलरको सम्पत्ति, जसले छोरीलाई चिसो लाग्दा जलाए २० करोड !
तपाईले धेरै धनि मानिसका थुप्रै कहानी (किस्सा) सुन्नु भएको थियो, होला तर पहिलो पटक सुन्नु होस् अलि आश्चर्य लाग्दो धनाड्य परिवारको कहानी । एक बाबुले छोरीलाई चिसोबाट अर्थात् जाडोबाट बचाउन २० करोड रुपैयाँ बराबर रकममा आगो लगाएका थिए। यसरी आगो लागाए १३ करोड… कुनै जमानामा हरेक हप्ता ४२ करोड डलर (करिब बयालीस अरब रुपैयाँ) कमाइ गर्ने एक कोलम्बियाका कोकिन किङ्ग …
January 20, 2018	Comments Off on बाबुले अर्काको घरमा काम गर्दै हुर्काएको छोरा सागर आलेमगर, पुरा पढ्नुहोस
नेपाल आइडलको टप फोर बाट बाहिरिएका सागर आलेको चर्चा परिचर्चा यतिबेला देश भित्र र बाहिर सबैभन्दा बढी छ । नेपाल आइडलमा चौथो भएर पनि उनको क्रेज पहिलो भन्दा कम छैन देश तथा विदेशको दौदाहामा निकै ब्यस्त सागर आलेको बारेमा नयाँबाटोडटकमले तयार पारेको उनको भित्रि पाटो यस्तो छ । पहिले-पहिलेका मान्छेहरु तराई झर्दैनथे तराईमा औंलोको ठुलो भय हुन्थ्यो तर गरिवीले औंलो, …
January 20, 2018	Comments Off on बाहुन क्षेत्री “धोति र जनै लगाएर नेपाल भित्रेका विदेशी हुन्” भनेपछि कार्यक्रम स्थलमै हंगामा (भिडियोसहित)
आदिवासी जनजातिको एक कार्यक्रममा एक युवाले बाहुन क्षेत्रीलाई होच्याएर बोलेपछि उक्त क्षेत्रमा रहेका क्षेत्री बाहुनहरू आक्रोशित बनेका थिए। फेरी फेरी दोहर्याएर बाहुन क्षेत्री धोति र जनै लगाएर नेपाल भित्रेका विदेशी हुन् भनेपछि कार्यक्रम स्थलमा नै झडप भएको थियो। हेर्नुहोस भिडियो:
January 20, 2018	Comments Off on चीनले विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हावा फिल्टर गर्ने टावर बनाएर संसारलाई बनायो चकित (भिडियोसहित)
चीनले विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हावा फिल्टर गर्ने टावर बनाएको छ । यसको उचाई ३३० फिट रहेको छ । यसको परीक्षण पनि चिनियाँ वैज्ञानिकले सुरु गरिसकेका छन् । वायु प्रदुषणमा विश्वै बदनाम सहरका रुपमा चीनको राजधानी बेइजिङलाई चिनिन्छ । यहाँ हरेक वर्ष धुवाँ र धुलोका कारण मानिसको दैनिकीमा गम्भी असर परिरहेको छ । समाचार अनुसार यहाँका हरेक व्यक्तिको शरिरमा दैनिक २१ …
कसले फाल्यो फोहोरको थुप्रोमा तीन महिनाको शिशु ? यस्तो छ नालीबेली….
January 20, 2018	Comments Off on कसले फाल्यो फोहोरको थुप्रोमा तीन महिनाको शिशु ? यस्तो छ नालीबेली….
गौशालाको व्यस्त सडक, एकले अर्कोलाई कसरी उछिन्ने भन्दै गुडिरहेका गाडी । आ–आफ्नै सुरमा हिँडिरहेका मान्छे । काठमाडौं यति धेरै व्यस्त भैसकेको छ कि चिनेका मान्छे पनि नचिने झैँ गरी हिँड्छन् । कसैलाई कसैको मतलब नै हुँदैन । -उद्धारपछि बालबालिका खोजतलास केन्द्रमा मर्निङ वाक गर्दै गौशालाको स्तूपालाई फन्को लगाउनेको सङख्या पनि पातलिन पाएको थिएन । गाडीको चर्को आवाजका बीच बाटोको छेउमा …
श्रीमतीको अंगले निर्धारण गर्छ श्रीमानको भविश्य, जानीराख्नुहोस् के हुन् ती अंग ?
January 20, 2018	Comments Off on श्रीमतीको अंगले निर्धारण गर्छ श्रीमानको भविश्य, जानीराख्नुहोस् के हुन् ती अंग ?
श्रीमतीको अंगले निर्धारण गर्छ श्रीमानको भविश्य, जानीराख्नुहोस् के हुन् ती अंग ? विवाहपछिको दाम्पत्य जीवन तब मात्र समधुर हुन्छ, विवाह पहिले नै केटा र केटीले एकअर्का बानी तथा व्यवहारबारे राम्ररी जानकारी लिन्छन् । साथै एक अर्कालाई मन पर्ने तथा मन नपर्ने बानी र व्यवहारबारे जानकार भएमा दाम्पत्य जीवन झन सौहार्दपूर्ण हुन्छ । तर महिलाका केही यस्ता लक्षण पनि हुन्छन्, जो …
January 20, 2018	Comments Off on शनिवार भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, शनिको दशा लाग्नेछ
शनिदेवलाई न्यायको देवता मानिन्छ । अर्थात् राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो र नराम्रो काम गर्नेका लागि नराम्रो फल दिने देवता । शनिवारको दिनलाई भगवान शनिको दिन मानिन्छ । यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष छ भने त्यस्ता व्यक्तिले शनिवारको दिन भोजन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । शनिदेवलाई खुसी राख्न चाहने व्यक्तिले पनि शनिवारको दिन भोजन गर्दा केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । केही …
यी युवतीको हट फिगर इन्टरनेटमा भाइरल बन्दै, युवाहरु नै चकित!
January 20, 2018	Comments Off on यी युवतीको हट फिगर इन्टरनेटमा भाइरल बन्दै, युवाहरु नै चकित!
दुनियामा एकसे एक सुन्दरीहरु देखिन्छ। तर कुनै यस्तो सुन्दरी हुन्छन जसलाई दुनिया हेर्न चाहन्छ। आज हामी यस्तो चिजसंग मिलाउदैछौ। जसको हट फिगर र शरीर देखेर जो कोहिले पनि आखा अन्त हट्ने छैन। आज हामी यस्ती सोशल मीडिया सेलेब्रिटीलाई देखाउदैछौ जसलाई देखेर किम कार्दशियनलाई पनि भुल्नु हुनेछ। २१ वर्षिय एन्टासियालार्इ रसियन किम कार्दशियन पनि भन्ने गरिएको छ । उनले आफ्नो फिगरलाई …
January 20, 2018	Comments Off on राति किन अन्डरवेयर नलगाई सुत्ने? कारण यस्तो रहेछ!
कसैले टाउजरमा लगाएर सुत्छन् त कसैले कसैले शर्ट अनि टिशर्ट जब कसैकसैले जम्मै लुगा फुकालेर सुत्छन् ।अब प्रश्न उठ्छ राति अन्डरवेर लगाएर सुत्न कतिको नोक्सान गर्छ वा फाइदा ?खास गरेर मान्छेहरु चिसो रातिमात्रै टाउजर र गर्मी समयममा अन्डरवेयर लगाएरसुत्छन् ।विज्ञहरुले यो मान्छन् कि यदि अन्डरवेयर लगाएर सुत्यो भने धेरै समस्याको सामना गर्नु सक्नुपर्छ । विज्ञहरुले भनेका छन् विना कपडा नै …
समाज सेवामात्र हैन,कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)लाई बेडमै चिया पुर्‍याउँछन् सीताराम कट्टेल(धुर्मुस )
January 19, 2018	Comments Off on समाज सेवामात्र हैन,कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)लाई बेडमै चिया पुर्‍याउँछन् सीताराम कट्टेल(धुर्मुस )
एउटा रमाइलो किस्सा, जुन कुनै लभस्टोरीमा आधारित चलचित्रको ‘सिक्वेन्स’जस्तै लाग्नसक्छ ।भ्यालेन्टाइनको दिन थियो । कठ्याँगि्रदा दिनहरुलाई भर्खरै विदाइ गरेर राजधानीले वसन्त ऋतुको आगमनमा न्यानो तापिरहेको थियो ।कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’को विवाह भइसकेको थिएन । ती दिनमा सीताराम नयाँबानेश्वरनजिकै थापागाउँमा फ्ल्याट लिएर बस्थे । भाइ, बहिनी उनकै साथमा थिए ।‘मेरो परिवारसँग बसेर रमाइलो गरौं,’ सीतारामले अफर गरे …
यस्तो कान्छी औँला हुने मानिस असाध्यै भाग्यमानी हुन्छन, थाहा पाउनुस औँलाबाट मान्छेको स्वभाव र भबिष्य (भिडियो सहित)
January 19, 2018	Comments Off on यस्तो कान्छी औँला हुने मानिस असाध्यै भाग्यमानी हुन्छन, थाहा पाउनुस औँलाबाट मान्छेको स्वभाव र भबिष्य (भिडियो सहित)
प्राचिन पढाई प्रविधीअनुसार हातको सानो औंलाले हाम्रो चरित्रबारे धेरै भन्न सक्ने कुरा सुन्दा हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ । आज हामी तपाइँलाई दक्षिण कोरीयाली विधिबारे जानकारी दिन्छौं । जस्ले गर्दा तपाइँले मानिसको सानो औंला हेरी त्यस मानिसको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । औंलाको पढाईका लागि प्रमुख कारक आकार र लम्बाइ हुन् । प्रत्येक औंलामा तीन भाग हुन्छन् । यी …
January 19, 2018	Comments Off on के तपाईलाई थाहा छ ? संसारमा सबैभन्दा पहिले कसलाई र कसरी एड्स भएको थियो ?
१ डिसेम्बरको दिन विश्वभरी विश्व एड्स दिवस मनाइने गरिन्छ । १९८८ मा यो दिन मानिसहरु बीच एड्स प्रतिको जागरूकता फैलाउनको लागि मनाइने गरिन्छ । यस पश्चात पूरा संसारले यस खतरनाक रोगको बारेमा थाहा पाउन सकेको थियो । तर एउटा यस्तो कुरा छ जसको बारेमा आज पनि संसारलाई थाहा नहुन सक्छ । वास्तबमा यो कुरा केहि मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ कि …
January 19, 2018	Comments Off on परिवार नियोजनको कुन साधन कस्तो ? जानी राखौ
परिवार नियोजनका साधन स्थायी र अस्थायी गरी २ किसिमका हुन्छन् । स्थायी महिला तथा पुरूष दुवैमा गर्न सकिन्छ जसलाई बन्ध्याकरण भनिन्छ । यसले स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्दैन तर महिलामा भने ढाड दुख्ने हुन्छ भन्छन् तर यो शल्यक्रियाको कारणले ढाड दुखेको भने होइन । कुनै कुनै समयमा ट्यूब राम्रोसँग टाइट भएन भने पे्रग्नेन्सी हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ ट्यूव पाठेघरमा नबसी नलीमा …
के गर्दैछिन् कुनै समयकी चर्चित नेपाली नायिका निरुता, उदित नारायण झाको परिवारसँग ? (तस्विर सहित)
January 19, 2018	Comments Off on के गर्दैछिन् कुनै समयकी चर्चित नेपाली नायिका निरुता, उदित नारायण झाको परिवारसँग ? (तस्विर सहित)
नेपाली सिने नगरीका कुनै समयका कतिपय हिट नायिकाहरु अहिले मिडियामा आक्कल झुक्कल देखा पर्छन् । कति विदेशिएका छन् भने कति विवाह गरेर घरजममै व्यस्त छन् । तीमध्येकी नायिका हुन् निरुता सिंह । हाल उनले बलिउड गायक उदित नारायण झाका परिवारसँगको फोटो सार्वजनिक गरेकी छिन् । निरुता झण्डै एक दशकदेखि भारतमै बस्दै आइरहेकी छिन् । नेपाली फिल्ममा आफ्नो व्यस्तता र चर्चाले …
January 19, 2018	Comments Off on कुवेत र कतारमा ६ बर्ष काम गरेर फर्केकी पन्चमाया,विदेशी डलर छोडेर माटोमा रमाउंदै
२२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर काठमाडौंको गोकर्णमा कृषि व्यवसायमा गर्दै आएकी छिन् सिन्धुपाल्चोक गुन्साकी ३२ बर्षिय पञ्चमाया तामाङ । विगत दुई बर्षदेखि कुखुरा पालन, टर्कीस् पालन र तरकारी खेतीमा रमाउंदै आएकी उनले ६ बर्ष विदेशमा कमाएको कमाई मात्र होइन वैंकबाट ऋण लिएर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आईरहेकी छिन् । pancha mayaब्राईट नेपाल मल्टिपर्पोज सर्भिसेज मार्फत उनी महिला कृषि व्यवसायी बन्ने …
Page 31 of 427« First...10202930313233»405060...Last »